• လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ ညှိနှိုင်းပေးမည်
• ကုမ္ပဏီ၏ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် Maintenance လုပ်ငန်းများကို Maintenance Team အားဦးစီး၍ စီမံခန့်ခွဲ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်
• ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသည့် Generator, Electrical and Mechanical Tools & Equipment များ၏ Operation, Maintenance and Repair လုပ်ငန်းများကို Site လိုအပ်ချက်နှင့် ညှိနှိုင်း စီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်ရန်။
• Generator, Electrical and Mechanical Tools & Equipment များ ပျက်စီးမှု နည်းပါးစေရန်အတွက်၊ အသုံးပြုပုံကိုသင်ပြပေးခြင်း၊ အသုံးပြုသူများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ပုံမှန် Maintenance ပြုလုပ်ပေးခြင်း များကို စီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်ရန်
• ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသည့် Heavy Equipment (Excavator, Compactor etc.) & Vehicle (Dump Truck, Crane, car etc.) များ၏ Operation, Maintenance and Repair လုပ်ငန်းများကို Site လိုအပ်ချက်နှင့် ညှိနှိုင်း စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ရန်။
• Heavy Equipment (Excavator, Compactor etc.) & Vehicle (Dump Truck, Crane, car etc.) များ၏ စစ်ဆေးခြင်း၊ ပုံမှန် Maintenance ပြုလုပ်ပေးခြင်း များကို စီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်ရန်
• Site operation ၏ Temporary work and Maintenance Team ကို စီမံခန့်ခွဲရန်
• GTI/B.Tech/B.E (Mechanical/Electrical) ဘွဲ့ရရှိသူ (သို့) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
• အသက် (35) နှစ် နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။
• ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁၀) နှစ်ရှိရမည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အတွေ့အကြုံကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်။
• Heavy Equipment & Vehicle စက်ယာဉ်ယန္တရားများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသည့်အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(5)နှစ် နှင့် အထက်ရှိရမည်။
• Computer, Email, Excel တတ်ကျွမ်းရမည်။
• ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ၊ ရိုးသားကြိုးစားသူ၊ စာရင်းများကိုတိကျစွာ စစ်ဆေးနိုင်သူ၊ ဦးဆောင်နိုင်သူ၊ Maintenance လုပ်ငန်းများ ကို ဦးစီး၍လုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
• Regular Site Inspection သွားနိုင်ရမည်။
• သီလ၀ါ Base Camp တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
Site Maintenance Manager Maintenance Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Pro Paragon Construction Co., Ltd Maintenance Jobs Maintenance Jobs Construction/Building Jobs in Myanmar, jobs in Yangon